Golaha ka taliya Suudaan oo kaashanaya sarkaal hore oo sirdoonka Israa'iil ah - BBC News Somali
Golaha ka taliya Suudaan oo kaashanaya sarkaal hore oo sirdoonka Israa'iil ah
4 Luulyo 2019
Image caption Maxamad Xamdan Xumeydti, oo ah taliye ku xigeenka Golaha Militeriga ayaa heshiiska u saxiixay Sudan
Golaha militariga Sudan ayaa heshiis la galay shirkad xarunteedu tahay Canada, kaas oo ku kacayo lix milyan oo dollar.
Shirkadda oo lagu magacabo Dickens and Madson ayaa golaha militariga ka caawin doonta inay helaan aqoonsi diblumaasiyadeed oo caalami ah.
Madaxa shirkaddan Ari Ben Menashe, oo horey u ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil ee loo yeqaano Mosaad, ayaa laanta afka Carabiga ee BBC u sheegay inay Golaha Militeriga Sudan ka caawin doonaan inay dhisaan xukuumad rayid ah.
Ben Menashe ayaa sheegay in Golaha Militeriga aya sidoo kale ka caawin doonaan inay doorasho ka dhacdo dalkaasi.
Heshiisku muxuu dhigayaa
Ben Menashe ayaa BBC u sheegay in shirkaddiisa ay Golaga Militeriga dunida u gudbin doonto siiba waddamada reer galbeedka.
Heshiiska ayaa dhigaayo in shirkadda ay militeriga Sudan ka caawiso inay helaan taageerada Maraykanka iyo dowladaha Sacuudiga iyo Ruushka, taas oo ugu dambeyn u horseedi doonto inuu helo taageero dhaqaale iyo hub militeri.
Mudaharaadayaasha Suudaan: Waxaan degdeg ku dooneynaa dowlad rayid ah
Maxaa Al-Bashir ku sugaya bannaanka madaxtooyada?
Heshiiska ayaa waxaa uu sidoo kale dhigayaa in kulan loo qabanqaabiyo hoggaamiye kuxigeenka Golaha Militeriga Maxamad Xamdan Dajalo oo loo yeqaanno Xumeydti iyo madaxweynaha Maraykanka.
Maxay tahay shrikadda Dickens and Madson
Shirkadda Dickens and Madson ee uu hoggaamiyo ninka horey ula shaqey jiray sirdoonka Israa'iil, waxay shirkadda ka shaqeysaa in ra'yul caamka ay arkaan wanaagga dhinacyada ay la shaqeeyaan.
Waxay shirkaddani horey ula shaqeysay madaxweynihii hore ee Zimbabwe, Robert Mugabe, ka hor intaan afgembi xukunka looga qaadin.
Golaha Militeriga Sudan ayaa loo haystaa eedeyn ah inuu laayay dad badan oo dibedbaxayaal ah, taas oo adkeyn doonto in wanaag loo sawiro.
Image caption Dibedbaxyada Sudan ayaa sababay in xukunka laga tuuro madaxweyne Cumar Al-Bashir
Waxaa intaa ka sii daran in hoggaamiye kuxigeenka guddiga militeriga Sudan Xumeydti loo haysto dambiyadii ka dhacay Darfur, halkaas oo la sheegay in lagu dilay 200,000 oo rayid ah.
Hay'adda Amnesty International oo arrintan ka walwalsan
Hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa sheegtay inay walwal weyn ka qabto heshiiska ay kala saxiixdeen Golaha Militeriga Sudan iyo shrikadda Dickens and Madson ee doonayso inay caawiso military dilay ama xirxiray dad rayid ah, markii uu xukunka la wareegay kaddib.
Amnesty ayaa warqad ay u qortay dowladda Canada, oo ah halka xarunta u ah shirkaddan, aya ku codsatay in baaritaan lagu sameeyo in heshiiskan uu xadgudub ku yahay xakameynta hubka, iyo inay suuragal tahay inuu dhiirrageliyo xadgudubyo ka dhan aadanaha.